TANAMBOROZANO - TOAMASINA : Polisy hamonjy fodiana lavon’ny balan’ny jiolahy
Nirefotra ny basy tao Tanamborizano Toamasina, ny maraimben’ny alahady 6 janoary tokony tamin’ny 2 ora. 6 janvier 2019
Polisy avy niasa handeha hamonjy fodiana tao amin’ny trano fonenany ao Tanamborozano, tsy lavitra ny sekoly Stella Maris, no notifrina jiolahy tamin’ny basy kalachnikov ka maty tsy tra-drano. Ny angom-baovao no nahalalana fa avy niasa ary mbola nanao fanamiana ilay polisy izao lavon’ny bala izao.
Raha ny tombana vonjimaika, dia jiolahy handeha hanatanteraka asa ratsy no nifanehatra tampoka tamin’ny lalan-kely tamin’ilay mpitandro filaminana. Ilay polisy izay nandeha moto. Noheverin’ireo jiolahy handeha hisambotra azy ireo no anton-diany ka izao niafara tamin’ny fitifirana izao. Nandalo teo amin’ny tanany ny bala, dia nivoaka tany an-damosiny. Tsy nisy sahy nivoaka ny manodidina raha tsy efa nazava ny andro. Marihina fa na ny basy PA na ny findainy, dia mbola teo aminy avokoa. Rehefa avy nitifitra ireo jiolahy dia rifatra nandositra.
Rasolonanahary Jacques no anaran’ilay polisy namoy ny ainy. “Tongue” kosa no solon’anarana fiantsoan’ny manodidina azy noho izy misy endrika itovizana amin’ilay mpanao rap gasy antsoina hoe Tongue tao amin’ny tarika 18,3. Vao telo taona teo ho eo no nivoahany sekoly fanofanana ho polisy. Tamin’ny volana janoary 2019 ity no niakatra ho tsipoka roa ny laharam-boninahiny. Tanora vao erotrerony tokoa izy. Teraka tamin’ny 19 jona 1988, izany hoe vao 30 taona monja. Tsy mbola manan-janaka fa efa manana fofom-bady. Tao Toamasina no toeram-piasany voalohany. Izy izay ao amin’ny polisy bazary kely no miasa. Noentina teny amin’ny biraom-paritry ny polisim-pirenena Toamasina ny razana nahafahan’ireo polisy namany namangy.
Nopotserin’ireo jiolahy ny mason’ilay tompon-trano
Tamin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra ( alahady antoandro), dia efa nomanina hihazo ny tany fiaviany any Alaotra-Mangoro ny vatana mangatsiakany. Raha ny fijoroana vavolombelona nataon’ireo polisy namany, dia olona tena tsara fitondran-tena ary mamy hoditra teny amin’ny toperam-piasana Rasolonanahary Jacques. Nanamafy izany ireo mpiara-monina aminy ao Tanamborozano. Olon’ny fiaraha-monina i Tongue ary mahay nifandray tamin’ireo manodidina azy.
Momba ilay kalaky nitifiran’ireo jiolahy an’ilay polisy tao Tanamborizano, dia fantatra fa basy efa nampiasaina tamin’ny raharaha fanafihana maro niseho tao amin’ny faritra Ambolomadinika, Tanamborozano ary Morarano, araka ny loharanom-baovao.
Taratry ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina izao tranga izao. Feno fahasahiana tanteraka ireo olon-dratsy.
Ankoatra io raharaha famonoana polisy io, dia trangana tsy fandriampahalemana nampivarahantsona ny mponina tao Toamasina ilay fanafihana jiolahy miisa 20 ny tokantrano iray tao Antseranampasika. Tsy vitan’ny entana maro lasa, dia mbola nopotserin’ireo jiolahy ihany koa ny ila-mason’ilay raim-pianakaviana tompon-trano ka poaka tanteraka ilay renim-pianakaviana.